“Siyaasaddii Waxa Dilay WADDANI oo Muniir u Noqday Siyaasi”- W/Q: Weriye Axmed M. Saleebaan | Berberatoday.com
“Siyaasaddii Waxa Dilay WADDANI oo Muniir u Noqday Siyaasi”- W/Q: Weriye Axmed M. Saleebaan
Waxay noqotay siyaasinimada Muniir Yare, mid u qaadan waa iyo fajiciso ku noqotay bulshada oo si uga biyo diiday. Ka sii darane’ waxase siyaasinimadiisu ay nusqaan ku tahay xisbiga WADDANI ee safka hore ee mucaaridadooda soo dhigay Muniir yare oo uu u noqday xariif cusub oo soo xoojiyay xisbigooda. Muniir Axmed Cigaal waxa uu ka mid yahay dhalinyarada sida xun u fahmay xadaarada iyo ilbaxnimada ee aan aqoon birimageydada iyo xurmada dadku ka mudan yihiin.
Waxa kaloo uu noqday weel wax lagu shubto oo hadba siyaasi qarrad lihi ku qabaanto muraadkiisa. Hase yeeshee, waxa uu caado ka dhigtay inuu cambaareeyo madaxda iyo masuuliyiinta xisbul-xaakimka iyo xukuumadda kaga jira ardaagiisa. Maalmahan dambena waxa uu isu burush ceebeedkiisa dul dhigtay Wasiirka Hawlaha Guud iyo Guriyeynta Somaliland, Md. Cali Xasan Maxamed (Cali Mareexaan) oo ka mid ah dhallinyarada sida ilayska qoraxda oo kale uga soo dhex baxay bulshadiisa oo toban sanno ka hor u cugtay inuu noqdo xildhibaan u metala Golihii u horreeyay ee Baarlamaan ee ummaddu gacanteeda ku soo dooratay. Muddadii uu Baarlamaanka ku jiray waxa uu la yimid inuu noqdo xubnaha kaliya ee Mudaneyaasha aqalka wakiiladda ee wax la qabta bulshadii soo dooratay. Isagoo dhammaan degmooyinkii gobolka laga soo doortay ee Togdheer ka fuliyay mashaariic kala duwan oo kor loogu qaadayo adeegyada ijtimaaciga ah sida Saldhigyo Boolis, Dugsiyo iyo xarumo caafimaad.
Sidoo kalena waxa uu ku shaambadoobay inuu ka dambeeyay weerar loogu gacan qaaday oo nabarro lagu gaadhsiiyay Jaamac Jiir oo ka mid ah dadka inta badan afkaartooda ku qora warbaahinta, taasi oo uu Muniir Muddo Todobaad ka badan u xidhnaa.
Waxaas ku soo gunaanadayaa tix aan ka soo xigtay gabay uu tiriyay Abwaan Cabdillaahi Dhoodaan, ILLAAHAY ha u naxariistee, oo ay ka mid ahaayeen ‘War duudkaaga ceeb saaran iyo, diilintiyo jaaha, Waxaaba kaaga duug roon adoo meyd dafuufanahe’
W/Q: WERIYE AXMED M. SALEEBAAN